Warkii Galicia: Khuraafaadkii dhulkii cajiibka ahaa | Wararka Safarka
Luis Martinez | 03/06/2021 10:20 | Magaalooyinka Spain, dhaqanka, Espana
Halyeeyada Galicia waxay ka jawaabaan nacasnimada dhul dhul leh boqolaal sano oo taariikh ah. Cimiladeeda mugdiga ah iyo roobka, xeebaheeda roobaadka iyo dooxooyinkeeda dhirta qoto dheer ayaa sidoo kale si la yaab leh isu amaahiya muuqaalka sheekooyin mala awaal iyo murugo leh.
Sidaa darteed, maahan fursad in Galicia ay tahay meel ay ka buuxaan sheekooyinka halyeeyada. Qaarkood waxay xididdada ku leeyihiin ceeryaanta waqtiga oo, xiise ahaan, waxay la xiriiraan sheekooyin la mid ah oo ku dhashay bartamaha iyo waqooyiga Yurub. Qaar kale, dhanka kale, waa dad asal ahaan asal ahaan ka soo jeeda oo ka jawaaba kuwa ugu fiican quraafaad hore. Haddii aad jeceshahay adduunka quraafaadka ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska, maxaa yeelay waxaan kuu sheegeynaa qaar ka mid ah halyeeyadii ugu caansanaa uguna caansanaa ee Galicia.
1 Legends of Galicia: Dhaxal aan caadi aheyn oo afka ah
1.1 Shirkadda Quduuska ah
1.2 Costa da Morte, waa ceel halyeeyo ah
1.3 Munaaraddii Hercules
1.4 Taajka dabka, halyeeyga qarniga dhexe ee naxariis darada ah
1.5 Kaniisadda Santa María de Castrelos iyo halyeeygii birtumaha
1.7 Godka King Cintolo
Legends of Galicia: Dhaxal aan caadi aheyn oo afka ah
Halyeeyadii badnaa ee Galicia ee soo noolaaday ilaa maantadan la joogo waxay istaageen tijaabada waqtiga mahadnaq aan caadi ahayn dhaqan afka ah ee dhulkaas. Sababtoo ah inbadan waxay ka yimaadeen dhaqan caan ah oo jiilba jiil looga kala gudbiyay sheekooyinka laga sheego habeennada qabow ee dabka hoostiisa. Laakiin, adigoon ku sii dheerayn, waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah halyeeyadaas.
Shirkadda Quduuska ah
Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay, isla waqtigaas, halyeeygii ugu caansanaa ee Galicia uguna soo noqnoqoshada badnaa shanta qaaradood Si ballaaran marka loo eego, waxay leedahay in geedi socodka dadka dhintay ay dhex maraan waddammada Galician habeenkii si looga digo geerida mustaqbalka. Safka noocan oo kale ah ee argagaxa leh waxaa ka sii horreeya muuqaal ballaaran oo la yiraahdo Istaandarka qofkii arkaana waa inuu ku raaco laambad iyo caws.
Sidaan hore kuugu sheegnay, halyeeygan wuxuu xiriir la leeyahay qeybaha kale ee Yurub. Tusaale ahaan, waxaa lala xiriiriyay Ugaadhsiga Duurjoogta o Mesnie hellequin ee dhul Jarmal. Laakiin maahan inaan intaas aadno. Qisooyinka la midka ah waxaa laga helaa khuraafaadka kale ee gunta. Tusaale ahaan, waxaan ka xusi karnaa Güestia gudaha Asturias, ka Cabsi gudaha Castile iyo Corteju in Extremadura iyo sheekooyin kale meelo kala duwan.
Dhinaca kale, sida halyeey kasta oo argagax leh oo u qalma milixdiisa, kani sidoo kale wuxuu leeyahay qaababkiisa looga hortago saameynta aragtida Santa Compaña. Inta udhaxeysa, u samee iskutallaab si uun, dhulka ku sawir goobo oo gudaha u gal inta aad sii marayso ama aad fuulayso tallaabada markab dalxiis.
Costa da Morte, waa ceel halyeeyo ah
Sidaad ogtahay, qaybta waqooyi-galbeed ee Galicia waa Costa da Morte o Costa de la Muerte, oo ah dhul magiciisu horeyba ugu amaahan yahay jiritaanka halyeeyada. Midka ugu horreeya iyaga ka mid ahi wuxuu dib ugu laaban yahay wakhtiyadii Roomaanka, maaddaama ay u arkeen inay calaamadeynayso finis terrae, taasi waa, dhamaadka dhulka.
Halkaas ayay ku bilaabatay baddu, sida ay aaminsan yihiin Roomaanku, kuwii soo galay way liqeen, ha ahaadeen biyaha laftooda, ama xayawaan bahal ah. Iyaga ka hor, Celtiyiinta waxay ku cibaadeysan jireen cibaadada dhulkaas.
Laakiin xaqiiqda ayaa ah in duurjoogta xeebahaas iyo xoogga duufaanka Atlantikku ay sababeen tiro badan Doomaha Burbursan. Kuwani waa goob kale oo ku habboon taranka halyeeyada. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa magaalooyinka qadiimiga ah ee qadiimiga ah ee ay biyuhu aaseen, kuwa dhagaxyada mucjisada ah ama kuwa quduusiinta ee bogsiiya meigallo (isha xun).
Waa laydhka keliya ee wakhtiyadii Roomaanka ka soo hadhay oo taagan. Sidaa darteed, waxay leedahay laba kun oo sano oo taariikh ah. Sidaad fahmi doontid, waa macquul in halyeeyo fara badan iyo sheekooyin quraafaad ah ay ka soo baxeen agagaarka munaaradda.
Kuwa ugu caansan ayaa ah in dadka degan Brigantium ama Breogan waxay ku noolaayeen cabsida Rafaa Geryon, kuwaas oo ka dalbaday noocyo kala duwan oo sharaf ah iyaga, oo ay ku jiraan carruurtooda. Iyagoo wajahaya suurtagal la'aanta inay isaga ka adkaadaan, waxay weydiisteen caawimaad Hercules, oo ku xujeeyay inuu la dagaallamo oo ka adkaado ka dib isku dhac dhiig ku daatay.
Kadib geesigii ayaa aasay Geryon oo, qabrigiisa dushiisa, ka taagay munaarad uu toosh ku caleemo saaray. Aad ugu dhow, marka lagu daro, wuxuu abuuray magaalo iyo, sidii haweeneydii ugu horreysay ee u timid loogu yeero Cruña, Hercules ayaa ku magacaabay tuulada cusub kadib La Coruña.
Halyeey kale oo ku saabsan munaaraddii Hercules ayaa sheegaysa in meesha ay Munaaraddii Breogán. Tani waxay ahaan laheyd boqor halyeey ah Galician oo ka muuqda quraafaadka irish, gaar ahaan Lebor Gábála Érenn o Buugga Guusha Irish.
Sida laga soo xigtay halyeeyga, Breogán wuxuu kor u qaadi lahaa munaaraddan, dusheedana, carruurtiisu waxay arki karaan dhul cagaaran. Iyagoo doonaya inay la kulmaan, ayay fuuleen oo yimaadeen fekradeed. Xaqiiqdii, cagtiisa Dhismaha Hercules waxaad maanta ku arkeysaa taallo loo hibeeyay boqorka halyeeyga ah, oo ka mid ah shakhsiyaadka waaweyn ee qisooyinka reer Galician.
Taajka dabka, halyeeyga qarniga dhexe ee naxariis darada ah
Qasriga Monforte de Lemos
Monforte de Lemos waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee Galicia. Mid ka mid ah halyeeyadeeda ayaa si hufan u sheegaya inta udhaxeysa qalin magaalada iyo Benedictine keniisad of San Vicente del Pino waxaa jiray marin qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa mara.
Mid ka mid ah jeer in Tirinta Lemos Wuxuu ka maqnaa qalcaddii si uu u fuliyo waxoogaa amar ah oo ka yimid boqorka, aabbaheed kaniisadda ayaa ka faa'iideystay marinka si uu u soo booqdo gabadha aristocrat ee gabadha, oo uu xiriir la bilaabay.
Markii uu soo noqday, ninkii reer Lemos ayaa ogaaday oo ku casuumay wadaadka inuu wax cuno. Laakiin waqtiga macmacaanka, halkii macmacaanka, wuxuu u adeegi jiray taaj bir bir-kulul-kulul, madaxiisa saaray, wuuna dhintay. Weli maanta, oo ku xigta barta baabtiiska ee kaniisadda keniisadda, waxaad arki kartaa xabaashii abtigii nasiib darrada ahaa, oo magiciisu ahaa Diego Garcia.
Kaniisadda Santa María de Castrelos iyo halyeeygii birtumaha
Kaniisada Santa María de Castrelos
Legend ayaa leh in magaalada Vigo ee Castrelos way noolayd birtumaha inaan si waalli ah u jeclaaday naag dhalinyaro ah. Wuxuu hore u ahaa da 'weyn waana markii ugu horeysay ee isaga ku dhacdo. Wuxuu go aansaday markaa inuu siiyo jawharad weyn, laakiin gabadhii way diiday.
Go'aankiisii ​​lumay, wuxuu doortay inuu afduubto oo uu ku xiro qalbigiisa. Si kastaba ha noqotee, gabadhii yarayd waxay ka codsatay inuu u oggolaado inay u aaddo maalin walba. Maaddaama kaniisaddu ku taallay aqoon-isweydaarsigiisa hortiisa, ninkii wuu aqbalay.
Si kastaba ha ahaatee, meiga ah wuxuu booqday birtumaha si uu ugu dhawaaqo inuu goordhow dhiman doono oo ay gacalisadiisa guursan doonto nin kale oo aad uga da 'yar isaga. Isagoo xanaaqsan, ayuu qaatay bir kulul wuxuuna aaday kaniisadda si uu u xumeeyo wajiga gabadha. Si kastaba ha noqotee, Dios wuxuu lahaa qorshayaal kale. Si dhakhso leh, wuxuu xidhay albaabka laga soo galo macbudka si uu u ilaaliyo. Weli waad arki kartaa wajiga koonfureed ee kaniisada maanta iyada albaabka la duubay.
Kaniisadda San Andrés de Teixido
Kaniisaddan yar ee ku taal magaalada Coruña ee Cedeira Waxay leedahay hermitage oo ah sheyga xajka. Waxaa ka mid ah dadka udhashay deegaanka odhaahda ayaa caan ku ah «Ku socota San Andrés de Teixido waxay ku dhacdaa morto ama in aan foi de vivo ahayn» wuxuuna ka jawaabaa halyeey xiise leh.
Waxay leedahay Saint Andrew Waan ka maseyray Santiago, oo awalba ahayd shay xaj ah. Cabashadiisa ayuu u gudbiyay Dios, oo murugadiisu ay taabatay. Sidaa darteed wuxuu u ballan qaaday in dhammaan dadka oo dhami ay u safri doonaan meeshiisii ​​quduuska ahayd iyo in, qof kasta oo aan noolayn, uu sidaas yeeli doono markuu dhinto ka dib, sidoo kalena uu dib ugu soo noqdo xayawaan.
Nooc ka mid ah halyeeygan ayaa sheegaya in San Andrés uu la degay doontiisii ​​xeebahan isla markaana markabkii loo beddelay dhagxaan maanta ka samaysan jasiirad yar oo ku taal xeebta cajiibka ah ee Cedeira. Si naxdin leh ayaa ahayd burburka markab ilaahay u balan qaaday awliyadiisa in lagu soo booqan doono xerada dhexdeeda dhamaan dadka.
Godka King Cintolo
Waxaan ku dhammeyn doonnaa safarkayaga halyeeyada Galicia kan oo ay ku jiraan boqorro naxariis badan, amiirad dhalinyaro ah, saaxiriin shar ah oo sameeya riyooyin aad u xun iyo wiilal jacayl ah.
Godka King Cintolo waa kan ugu weyn magaalada Galicia, dhererkiisuna waa in ka badan 6 oo mitir. Way ku jirtaa Mariña Lucense, gaar ahaan kaniisadda of Muran leh. Waa hagaag, sida laga soo xigtay halyeeyga, waqtiyadii hore, aaggu wuxuu ahaa barwaaqo boqortooyada Bría boqortooyadiisu ahayd Suunka.
Waqtigaas, wuxuu lahaa gabar qurux badan oo la yiraahdo Xila kaasoo si qoto dheer u jeclaa ninka dhalinyarada ah Uxío, oo isaga u dhigma. In kasta oo aanu sharaf lahayn, arooska labadoodaba hore ayaa loogu heshiiyey markii sixirrowgii xoogga badnaa Manilan Wuxuu ugu hanjabay boqorka inuu abuuri doono sixir soo afjari doona boqortooyadiisa hadii uusan u dhiibin Xila xaaskiisa.
Laakiin Uxío ma uusan rabin inuu u ogolaado oo wuxuu dilay saaxiriintii. Si kastaba ha noqotee, isagu horeyba wuu u diyaarshay sixirkiisa, markii jacaylka geesinimada leh uu ku soo laabtay Bría, iyaduba waa la waayey. Meeshii uu joogey wuxuu ka helay oo keliya godka afkiisa. Quus, wuxuu u galay si uu u raadsado gacalisadiisa mana soo bixin markale.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay qaar ka mid ah halyeeyada Galicia Ka caan ah. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo aan uga tagi doonno, malaha, maqaal kale. Iyaga ka mid ah, in ka mid ah aasaaska Pontevedra, tii Mount paralaia, tii mucjisada Bouzas ama taas Mount Pindo. Wax kasta oo ku hareeraysan Galicia waa sixir iyo xiiso, marka hadaad awoodo, ha moogaanin fursad aad ugu baxsato meelaha aan soo sheegnay oo aad ugu raaxeysatid quruxda dalxiiska miyiga deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Halyeeyadii Galicia
Filimada la daawado ka hor intaadan aadin Paris
Tallaalada loogu safro Brazil